Fampianarana Soratra Masina /
"Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra " 1 Korintiana 12:31
Ny Epistily hoan’ny Korintiana dia taratasy nalefan’ny Apostoly hoan’ny Krsitiana tao amin’io Tanana io mba hanazavana amin’izy ireo ireo fanontaniana marobe napetrak’izy ireo momba ny foto-pinoana vitsivitsy. Isan’izany ny mahakasika ny fanomezam-pahasoavana. Ny tananan’i Korinto mantsy amin’ny maha-tanan-dehibe ifanerasaran’ny olona samihafa azy, indrindra ihany koa ny firehan-kevitra maro samihafa; dia very hevitra na diso hevitra mihitsy aza ny maro. Sarotra ny manavaka ny marina sy ny diso amin’ireny zavatra ireny, koa miezaka i Paoly amin’ny taratasy izay nosoratany mba hanazava misimisy kokoa ny fahamarinana ara-Baiboly. Izy ireo rahateo dia liana amin’ny zava-baovao mety manaitra, amin’ny maha-tanàna mandroso azy.
Isan’izay zavatra nanaitra ny amin’ny fanomezam-pahasoavana maro nisy tamin’izany fotoana izany. Raha tsorina anefa, ny fanomezam-pahasoavana rehetra voalaza ao amin’ny 1 Korintiana 12 dia fanomezana avy amin’Andriamanitra, izany hoe fanomezam-panahy izay omen’ny Fanahy Masina ny olona tsiorairay avy arakaraky ny itiavan’ny Fanahy Masina azy. Misy amin’izy ireny ny manaitra sy miavaka, tahaka ny miteny amin’ny fiteny tsy fantatra ohatra, ary tsy maintsy nandamina izany ny Apostoly, mba tsy hampikorontana ny Fiangonana. Ohatra amin’izany, raha misy miteny amin’ny fiteny tsy fantatra, dia tsy maintsy misy mandika teny, raha tsy izany dia tsy navela niteny izay ireny. Tsara ho marihina ihany koa fa ny tena fanomezam-pahasoavana marina dia tsy angatahina na tsiriritina, fa azo maimaimpoana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izany. Miankina be dia be amin’ny maha-ara-dalàna ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra ny hanomezan’ny Fanahy Masina izany.
Fa eto amin’ny andininy manokana izay raisintsika eto dia misy ny lazaina fa “fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra” izay ampirisihina ny ananana azy, dia ny fitiavana velabelarina eo amin’ny 1 Korintiana 13. Mipetraka ny fanontaniana hoe “nahoana no lazaina fa lehibe indrindra ny fitiavana? Ireo fanomezanm-pahasoavana rehetra izay voatanisa ao amin’ny" 1 Korintiana 12 dia miorina na mipetraka eo amin’ny fitiavana. Izany hoe nomen’Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavana ireny mvba hahafahana mampahery sy mampandroso ny hafa. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia mifameno sy mifanampy, tsy misy mahavita tena na mahazo mieboebo fa tsara na ambony. Mitovy torosy daholo izy ireo, fa ny fitiavana kosa dia kofehy mampifandray azy rehetra. Ny zava-misy mantsy eo amin’ny kristiana na eo anivon’ny Fiangonana mihitsy, dia misy ny fiheveran-tena ho zavatra ka manindrahindra ny fanomezam-pahasoavana izay ananany, ary manao tsinontsinona ny hafa, mety milaza azy ireo mihitsy ho tsy araka ny tokony ho izy, na ampiasain’ny devoly mihitsy. Tsy mahagaga ny mahita Fiangonana miady, misaraka sy mifanaratsy ary mifanenjika mihitsy. Indrisy, ny fanomezam-pahasoavana madinika sy ambany no ifandritahana, fa ny lehibe indrindra adino sy atao ambanin-javatra.
Maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra: raha ny marina dia tokony ho katsahina amin’ny fomba rehetra ny hananana fitiavana, manoloana ny tsy fitiavana sy ny fankahalàna izay miseho lany ankehitriny.izany, izay raha ny marina tsy vidiana vola ny fitiavana, saingy sarotra amin’ny maro ny mitady sy mampihatra izany, na eo anivon’ny ankohonana izany, eo amin’ny isan-tokantrano ihany koa. Eo anivon’ny Fiangonana no tokony ho loharano ivoahan’ny tena fitiavana, saingy indrisy…
Niara-nisakafom-pitiavana na agape izy ireo tamin’izany, niombonana ny fananana rehetra ary tsy nisy nalahelo teo aminy. Izany no isan’ny nampandroso ny Fiangonana voalohany, satria hitan’ny olona teo amin’ny fiainana andavandro. Ny fivavahana kristiana ihany koa dia mitondra tara-pahazavàna eo amin’ny fiainana andavanandro, araka ny Tenin’i Jesosy hoe: “Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao”.
Ry Havana malala, manoloana ny tsy fitiavana, ny fankahalàna, ny fisarahana, ny ady eny amin’ny tribonaly ifandroritan’ny Fiangonana sy ny kristiana maro samihafa, manao antso avo ny Apostoly Paoly, tahaka izay nataony tany Korinto fahizay. Maniria ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Ndao hametraka an’izany ho tanjona amin’izao fotoana izao, fa milentika any anaty fotaky ny ady sy ny fahalotoana ny hasin’ny fitoriana Filazantsara sy ny Fiangoanana. Nahoana no misy kristiana tsty mifampiditra an-trano, ny mpiray tam-po aza tsy mifandevi-maty, Mpitandrina sy Birao mifandrafy, Fiangonana samy Fiangonana mifanaratsy. Tsia, tsy mifanaraka amin’ny Lalanan’ny Filazantsara izany.
Hangatakany Fanahy Masina isika amin’ny Alahady Pentekosta izao: raha Fiangonana manana ny Fanahy Masina marina dia tokony ahitana taratra izany fanomezam-pahasovaana lehibe indrindra. Ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana. Ny famantarana ivelany ahafantarana ny kristiana dia ny fananana fitiavana. Ndeha isika hanamboatra ny fiainanatsika, manoloana ireo izay tsy mba mahita izany fitiavana izany, fa ailiky ny fiaraha-monina, mahantra sy noana, mijaly sy sahirana noho ny aretina, ny tsy fitovian-tsaranga, ny tratry ny tsindry hazo lena…
Araka izany, tsy tokony ho variana amin’ny ara-panahy na ny fanasoavana fotsiny ny raharahan-tokantranony ny Faingonana sy ny Kristiana, fa tokony hivoaka any amin’izao tontolo izao, hijery sy hiatrika ny zava-misy.
Mila mitandrina tsara anefa ny kristiana sy izao tontolo izao ny amin’izay antsoina hoe fitiavana izay dradradraina etsy sy eroa. Ny fitiavana resahina eto dia ny fitiavana araka an’Andriamanitra dia ny fitiavana agape izany. Fitiavana tsy misy fepetra ary mandrakizay izany ambaran’ny Baiboly izany, fa tsy tahaka ny an’izao tontolo izao izay sady maloto no mety misy tambiny ihany koa. Anjarantsika ny mitory sy mampianatra izany fitiavana marina izany, mba hahazoan’Andriamanitra manjaka aao am-pon’ny kristiana tsirairay avy, amin’izao andro ahavelomana izao.
Dia mahereza tompoko!